Nooca cusub ee Scratch 3.0 deegaanka wax lagu barto ayaa yimid | Laga soo bilaabo Linux
Maanta waxaan ka hadli doonaa mashruuc aad u wanaagsan oo loogu talagalay jawiga waxbarasho iyo kuwa yar yar ee guryaheena ku sugan ee raba inay bartaan barnaamijyada, in kasta oo ay sidoo kale waxtar u leedahay dadka waaweyn iyo dhalinyarada.
Mashruuca aan ka hadlayno waa Scratch oo ah waa luuqad barnaamij barnaamij ah oo muuqaalka ugu weyn uu yahay in loo oggolaado horumarinta xirfadaha maskaxda adoo baranaya barnaamijyada adigoon aqoon qoto dheer u laheyn koodhka.
Sifooyinkiisu waxay ku xiran yihiin fahamka fudud ee fikirka xisaabinta Waxay ka dhigeen mid caan ka ah waxbarashada carruurta, dhalinyarada iyo dadka waaweyn.
Luuqaddan barnaamij waxaa loo isticmaalaa ujeeddooyin waxbarasho si loogu abuuro animations si fudud oo loogu adeego hordhac u ah waxyaabaha barnaamijyada sii horumarsan.
Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa madadaalo aad u tiro badan iyo ujeedooyin waxbarasho dhisme sida: mashaariicda sayniska (oo ay ku jiraan jilitaanka iyo aragtida tijaabooyinka), muxaadarooyin duuban oo leh bandhigyo xamaasad leh, sheekooyin saynis bulsho oo xamaasad leh, farshaxan is dhexgal ah, muusig, iwm.
Waxaad ku arki kartaa mashaariicda kala duwan ee jira bogga 'Scratch', wax ka beddel oo xitaa tijaabi iyaga oo aan dhab ahaantii badbaadinaynin isbeddelada maadaama aysan u baahnayn nooc diiwaangelin ah.
Iyada oo gacan laga helayo xoqida, barnaamijyada waxaa loo sameeyay iyada oo la maareynayo astaamo caqli-gal ah oo caadi ah oo ku xiran silsilad macquul ah iyadoo la isbarbardhigayo shirkii Lego dhise.
Deegaanka waxaa loo bilaabi karaa sidii codsi gooni ah ama waxaa loo geyn karaa adeeg khadka tooska ah laga furayo biraawsar.
Xoqitaanku wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay adeegsadaan barnaamijyo ay wadaan barnaamijyo leh waxyaabo firfircoon oo badan oo loo yaqaan 'sprites'.
Sprites waxaa loo rinjiyeyn karaa sida muuqaallada vector ama bitmap, laga soo bilaabo bogga Scratch ee u gaarka ah iyadoo la adeegsanayo tifaftire fudud oo qayb ka ah mashruuca, ama sidoo kale waa laga soo dhoofin karaa ilo dibadeed oo ay ku jiraan kamaradaha webka.
1 Ku saabsan nooca cusub ee loo yaqaan 'Scratch 3.0'
2 Sidee loo helaa xoqid 3.0?
Ku saabsan nooca cusub ee loo yaqaan 'Scratch 3.0'
Nooc cusub oo muhiim ah oo ka mid ah barnaamijka 'Scratch 3.0' ee muuqaalka muuqaalka ah ayaa dhowaan la sii daayay, oo ay soo saareen cilmi baarayaal ka tirsan Machadka Massachusetts ee Teknolojiyada oo ah barxad tijaabo ah oo carruurta lagu barayo inay codeeyaan.
Qaar badan oo ka mid ah barnaamijyada cusub ee barnaamijka ayaa lagu daray, oo ay ku jiraan qaybo loogu talagalay abuurista saamaynta dhawaaqa, hawlwadeenada ka baaraandega ereyga, baloogyo lagu sawirayo, iyo maaraynta sawirada 'sprite'.
Maktabad dheereyn gebi ahaanba dib loo naqshadeeyey ayaa la soo jeediyey, taas oo waxay bixisaa qaybo badan oo baloog ah, oo ay ku jiraan kuwa u oggolaanaya isdhexgalka qalabka iyo adeegyada dibedda.
Xirmada waxaa ku jira noocyo cusub oo spritrit ah, codad iyo muuqaalo sooyaal ah. Isku xirnaanta waxaa loo habeeyay si loogu isticmaalo kiniinnada.
Sidee loo helaa xoqid 3.0?
Waa muhiim in la xuso taas xilligan Ma jiraan xirmo rasmi ah oo xoqid ah oo loo adeegsado Linux, sidaa darteed xilligan la joogo kuwa horumariya waxay na siinayaan xirmooyinka kaliya Windows iyo Mac OS.
Xirmooyinka nidaamyadan waxaa laga heli karaa bogga rasmiga ah ee mashruuca qaybta soo dejintooda. Isaga link waa kan.
Xoqitaanku shaki la'aan waa mashruuc aad u fiican oo loo isticmaali karo goobaha waxbarashada laga bilaabo dugsiyada hoose ilaa iskuulada dadka waaweyn ee doonaya inay ku bilaabaan barnaamij qaab fudud.
Qodob muhiim ah in la xuso ayaa ah in dadka wax soo saara Scratch ay ka shaqeynayaan nooc ka mid ah codsigooda si loogu isticmaali karo Chromebooks iyo inay leeyihiin qorshayaal Linux xitaa haddii aysan aheyn mustaqbalka dhow.
Waqtigan xaadirka ah kuwa xiiseynaya inay wax yar ka ogaan karaan xoqida oo ay rabaan inay ugu adeegsadaan Linux, habka kaliya ee aan u adeegsan karno waa shabakada shabakadeena internetka Xiriirka soo socda.
Codsiga Windows waxaa loo isticmaali karaa iyadoo la kaashanayo Wine-ka Linux, xitaa haddii aan isku dayo inaan si dhakhso ah u rakibo, khaladaad ayay igu tuurtay, haddii qof maamulo inuu fuliyo, waanu ku qanacsan nahay haddii aad wadaagto qaabeyntaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Nooca cusub ee jawiga waxbarasho ee loo yaqaan 'Scratch 3.0' halkan ayuu joogaa
Waxaan u maleynayaa xirmooyinka qadla'aanta inay ka yimaadeen xoq 2.0
Isku-dhafka: isbedelka cusub ee 2019 ee il-furan?
ShellCheck, oo ah koronto si loo fiiriyo qoraaladaada Shell